That's so good, right?: Feeling Our Love Flow
ကျွန်တော် ….ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ ရှိနေချင်ရုံလေးသက်သက် ဆိုတဲ့ ဖီလင်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဥက္ကာနဲ့ ကျွန်တော့် ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအရသာ ကိုမျှဝေခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးစေတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကို အမှတ်ရနေစေတဲ့နေရာလေး။ ကြည်နူးမှုတွေဝေမျှခဲ့ကြတယ်၊ ၀မ်းနည်းမှုတွေကို အချင်းချင်းဖေးမခဲ့ကြတယ်၊ ရှေ့လာမယ့် အနာဂါတ်ကာလတွေအတွက် တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေကို ကျွန်တော် ပြန်လည်တမ်းတစေပါသောနေရာလေးပါ။ အခုတော့ သူက သူက ကျွန်တော့်ဘ၀ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ မနေ့ညက ကောင်းကင်တစ်ခွင်ရဲရဲနီနေတဲ့ မုန်တိုင်းကြီးလို အခုတော့အချိန်နဲ့အတူ မှိန်ဖျော့ဝေးကွာသွားပြီလေ။
ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်း ထာဝရ မတည်မြဲဘဲေ၀၀ါးသွားမယ့် အချစ်စိတ် ခံစားချက်တွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ခရေပန်းလေးတွေလို တစိမ့်စိမ့်မွှေးကြူ နေလည်း ရနံ့လေးကမပြယ် ခပ်သင်းသင်းနဲ့မွှေးပျံ့နေတဲ့ အချစ်ရနံ့လေးတွေ၊ ပန်းသွေးရောင် နှင်းဆီရောင် ဘယ်လိုရည်ညွှန်းရမလဲ မသိတဲ့ အချစ်ခြည်ထည်တွေနဲ့ လွန်းထိုးယက်လုပ်ထားတဲ့ ခြုံထည်တွေနဲ့ ထွေးဖက်ခဲ့ကြတဲ့ ကြည်နူးရင်ခုန် တိမ်းမူးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ ထိခတ်ခဲ့ကြချိန်များရဲ့ ပူနွေးမှုများကို အခုအချိန်ထိ ကိုယ် စိတ် ခန္ဓာတွေထဲ အနက်ရှိုင်းဆုံး စူးနစ်ဝင်ရောက်နေစဲဆိုရင် လွန်တယ်ပြောကြမလား။ လှပကောင်းမွန်သော အချိန်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု မတ်မတ်ရပ်နေမိသော ကမ်းခြေသဲသောင်ပေါ်ဝယ် မျက်စိတွေကို မှေးမှိတ်လိုက်စဉ်တိုင်း ဟိုသည်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ကျောက်ဆောင် များထဲက ခပ်သေးသေးကျောက်ဆောင်တစ်ခုမှာ သူရပ်နေပုံကို မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ပုံဖော်မှန်းဆလို့ရနေပါရဲ့။ လှိုင်းလုံးကြီးတွေရိုက်ခတ် လာတိုင်း ဟေးကနဲ အော်အော်တတ်တဲ့ ဥက္ကာ၊ ညနေခင်း ဘယ်သူမှရေမကူးတော့ချိန် ကမ်းစပ်မှာ ဟန်ရေးတပြပြနဲ့လမ်းလျှောက်တတ် ပြီး အလင်းရောင်သိပ်မရှိတတ်တဲ့ သဲပြင်ပေါ်ဆင်းခဲ့ဖို့ ‘ဟေး… Teddy ရုပ်ကလေး….လာခဲ့ပါကွ…အေးဆေးပေါ့….ပြီးမှ ညစာသွားစားကြ မယ်လေ’ လို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့ သူ့အသံခပ်ချိုချိုလေးနဲ့ခေါ်တတ်တာကိုလည်း ကြားယောင်မိနေတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် သာယာပျော်ရွှင်ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်များပါလဲ။ ကျွန်တော် ကျွန်တော်ဟာ ဥက္ကာအတွက်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းဖြစ်ချင် နေခဲ့သူပါ။ ဟော….ဟိုမှာ ရပ်နေတာ သူများလား? သူ့အငွေ့အသက်တွေကို ခံစားရရှိနေသလိုပဲ… ခပ်သိပ်သိပ်တိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးလေးတွေက ကျွန်တော့်ပါးပြင်ကို သူ့ဆံနွယ်တွေနဲ့ပွတ်သပ်နေဆဲအတိုင်း ခံစားရရှိနေသလိုပဲ…အာ ဆားနံ့သင်းတဲ့လေကို ရှူရှိုက်ရတာလေးကလည်း သူ့ရင်ခွင်အနှံ့ လျှာနဲ့တို့ထိစဉ်တုန်းကအတိုင်းပါပဲလေ။ သတိရမိသေးတယ် ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီကို သူဆွဲချွတ်တာမရလို့ နှစ်ယောက်သား နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရယ်မောကြတာ ၁၀မိနစ်လောက်တောင်ကြာမလားဘဲ။ သူ ကမူးရူးထိုးဆန်တာလေးက တစ်ခါတလေ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ တည်းခိုကြတန်းအခန်းထဲဝယ် ဘယ်သူမှမမြင်ဆိုပြီး အတွင်းခံ လေးတွေနဲ့ ဟိုသည်သွားလာစားသောက်နေကြရင်း ရုတ်တရက်လူလာလို့ အပေါ်ဝတ်ထယူကာမှ ဘောင်းဘီလျောကျတဲ့အဖြစ်က ကျွန်တော့်အတွက် အတော်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါရဲ့။ အနက်ရောင်ပိုးသား ဘောင်းဘီပျော့ပျော့လေးပေါ်ကနေမြင်နေရတဲ့ သူ့ငပဲကောက် ကြောင်းကြီးက အမြှောင်းလိုက်ခုန်းခုန်းထနေခဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူပစ္စည်းဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ လန့်မိသားပါ။
အိုး….သူ့ရင်ခွင်ထဲကို အသာလှဲလျောင်းရင်း ရင်ဘတ်ပေါ်ကအမွှေးနုလေးတွေကို တို့ထိကစား ဗိုက်သားပေါ်က မှဲ့လေးတစ်ခုကို အသာခိုးနမ်း တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတဲ့ သူ့ရင်ခုန်သံ ကဆုန်ဆိုင်းပြေးနေတာကိုနားထောင်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ပန်းအရကြည့်ရင် သူပြောသမျှနေ သူဆိုသမျှလိုက်လျော အစပိုင်းမှာ မာန်မပါဘူးထင်ရပေမယ့် သူ့အပြုအစုတွေကြားလွင့်မျော ကာ စိတ်မုန်တိုင်းထန်လာရပုံများ သူတောင် တားမြစ်ယူရတဲ့အထိအရိုင်းဆန်လွန်းလှပါတယ်။ ကိုယ်ဟန်လှလှနဲ့ နွေးထွေးလှတဲ့ သူ့ရင်ခွင်အစုံဟာ ပိုးသားဘောင်းဘီတို အနက်လေးကြောင့် မ၀ံ့မရဲ ခိုဝင်ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ခဲ့ရတာ အခုအချိန်ပြန်စဉ်းစားမိရချိန်တိုင်း အခုတိုင် တသိမ့်သိမ့် ရင်တုန်မိပါရဲ့လေ။
သူ့နာမည်လေးကို ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တိုင်း ရင်ဘတ်ထဲဝယ် ကျားတစ်ကောင်ဟိန်းဟောက်လိုက်သလိုဟိန်းသွားပုံများ ကျွန်တော့် နားထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေပါတယ်။ ရေအိမ်တက်ချင်လို့ ကြွေကမုတ်ပေါ်ထိုင် ကိစ္စပြီးချိန် ရေပန်းနဲ့ထိုးဆေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် ခရေ၀တွင်သာမက အတွင်းထဲကပါ ကလိကလိဖြစ်လာမိပါရဲ့။ မို့မို့မောက်မောက်နဲ့ အတွင်းခံဝတ်ထားတာတောင်လျှံကျနေတာ မိန်းကလေးတွေထက်တောင်မိုက်သေးတယ်ဆိုတဲ့ ဥက္ကာ့ပြောစကားရယ် နုညံ့စွာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မှုတွေကို သတိရမိပါတယ်။ ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် အသာပွတ်သပ်ဆေးကြောမိပြန်တော့ ပူနွေးတဲ့လျှာကြီးကိုအပြားလိုက်ထားကာ တပြတ်ပြတ်မည်အောင် လျှာမုန်တိုင်းမွှေပေးခဲ့တဲ့အရသာကို ကျွန်တော် ကြက်သီးများတောင်ထတဲ့အထိ တမ်းတရပါပြီ။ လျှာကိုထိပ်ဖျားလေးမှာစု ခရေ၀အတွင်း ပိုင်းထဲ ထိုးထိုးထည့်ကာ ကလိတာကိုရော အားမရတော့လို့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ နှိုက်ပြုချင်လာရင်သုံးတတ်တဲ့ ချောဆီရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရနံ့ ချိုအီအီကိုရော လိုချင်လာပြန်တယ်။ အိုး….အ…အ လုံးဝန်းတဲ့ထိပ်ဖူး အရင်းအဖျား တညီတည်းတုတ်တဲ့ စတီးလိုမာတဲ့ သူ့ညီဘွား ခပ်ဖြေဖြေးတိုးဝင် တိုးထွက်တာကိုလဲ လိုအပ်နေပြီကွာ။ ပင်လယ်လေညှင်းအနံ့လို ဆားငံနံ့သင်းတဲ့ အရသာခပ်ပျော့ပျော့ လေးကို လျှာနဲ့တို့ထိ အရသာခံချင်လိုက်တာ…အိုး…ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ဖျဉ်းကနဲယားယံသွားမိတာများ တင်သားဆိုင်တွေကော ရွှေဥတွေကော ပြီးတော့ ငပဲကိုရော ဥက္ကာဆံနွယ်တွေနဲ့ပွတ်တိုက်သွားမိသလိုဖြစ်သွားတာလေ။ ချောမွေ့သော ခပ်တွဲတွဲဖြစ်နေသော သူ့ရဲ့ရွှေဥလေးတွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်နားဝယ် ရှုံ့ပွ ရှုံ့ပွဖြစ်နေတတ်တာကို သူ့ငပဲအောက်ခြေရင်းကို ကျွန်တော် လျှာနဲ့သရပ်လိုက် တိုင်း ဖြစ်တတ်တာကို တမ်းတမိစေတယ်။
‘အိုး…ဘယ်လောက်တောင် ချစ်ဖို့ကောင်းခဲ့လဲ ဘေဘီရယ်’
၀င်းဝါနေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို ကိုင်တွယ်လိုက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ ရေမြုပ်မွေ့ယာတစ်ခုပေါ်လက်ထောက်လိုက်ရသလိုပဲ အိထွေး ထွေးဖြစ်နေတတ်တာ၊ အင်း……တင်နှစ်မွှာကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီး အသာဖြဲလိုက်တိုင်း ပန်းသွေးရောင်တောက်နေတဲ့ သူ့ခရေ၀ လေးက လာပါ လျှက်ပါလှည့်လို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုဖြစ်တတ်တာ၊ ကျွန်တော် လျှာမုန်တိုင်းမွှေတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း သူပြန်လုပ်ပေးချိန် ရောက်ရင် ကျွန်တော့်မှာ လေဟာနယ်ထဲ ပစ်ပစ်ကျသလိုခံစားရတာ အိုး….အခုတောင် ရင်ဘတ်ထဲက တထိတ်ထိတ် ခုန်နေတဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေက ထောက်ခံနေတတ်တယ်။ ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လုံးဝန်းရှည်လျားတဲ့ သူ့ငပဲကြီး ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကြား တိုးဝင်လာ တဲ့ ခံစားချက်က ၀င်စက ခပ်အောင့်အောင့်ဆိုပေမယ့် ချောဆီအမြဲသုံးတတ်တဲ့အတွက် ရင်ထဲဟာတာတာဖြစ်အောင်ကို ဆောင့်ချက်တွေ ကိုငံ့လင့်စေပါရဲ့။ တစ်ခါ တစ်ခါများ ဘေးက တည်းခိုနေတဲ့လူတွေကြားသွားမှာ မစိုးရိမ်မိဘဲ ပါးစပ်ထဲက လွှတ်ကနဲ အော်သံတွေထွက် ထွက်သွားမိတဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ဆောင့်ချက်တွေပါ။ အခန်းထဲက ညစာစားပွဲ မဟော်ဂနီရောင်ကျွန်းစားပွဲကြီးပေါ် မှောက်ခိုင်းလိုက် ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းလိုက်နဲ့ အနေအထားမျိုးစုံမှာ အလိုက်သင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့ သူ့ပစ္စည်းကြီးဟာ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေကိုဖြတ်သန်းလို့ ခရေ၀ထဲတိုးဝင်လာတာများ အရမ်းမိုက်တဲ့ဆိုဒ်ပါပဲ။
အချိန်ကောင်း နေရာကောင်းတစ်ခုမှာ တွေ့ဆုံအောင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို ကျွန်တော် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ တောက်ပနေတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ ညနေခင်းမွေးနေ့ပွဲမှာ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်နေတဲ့ ဥက္ကာဆိုတဲ့ ကောင်ကလေး သူ့ကားပျက်သွားလို့ ကျွန်တော့်ကားနဲ့ခေါ်သွားပေးဖို့ကြုံဆုံလာတဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်ဟာ တကယ့် ကြယ်ရောင်စုံတဲ့ညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကားကို စီးလာချိန် တစ်ချိန်လုံးလိုလို ရယ်မောစရာစကားလေးတွေနဲ့ စကားကြွယ်တတ်တဲ့ ဥက္ကာဟာ တကယ့်ကိုစကားပြောကောင်းသူပါ။
အာ….ဥက္ကာရဲ့ ဒုံးပျံထိပ်ဖူးကနေ နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျတဲ့အထိ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လျှာဖျားလေးတွေနဲ့ရစ်သိုင်းစုပ်ပြုမိတိုင်း ဘယ်လိုအနံ့အသက် ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုမှမရခဲ့စဖူး။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအားကောင်းသူမို့လား ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူ မို့လား အို…မသိတော့ပါဘူး ချွေးနံ့လေးကိုက ရင်ခုန်တိမ်းမူးစေတာပါပဲ။ လေရူးသုန်သုန်တိုက်ခတ်နေချိန်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ထွေးဖက်ထားချိန် လက်ကလေးတွေ ယှက်နွယ်ထားချိန် ပါးလေးတွေကို မွှေးကြူကျချိန်တွေကို ကြည်နူးခဲ့ကြသလို တောက်တောက်ပပ နွေရာသီနေ့လယ်ခင်းတွေမှာ တိရစ္ဆာန်တွေလို အရိုင်းအစိုင်း လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြချိန်များကို တမ်းတမိတာ မလွန်ဘူးထင်ပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ သူက သွားပြီ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲက ထွက်ခွာသွားပါပြီ။ အကြောင်းပြချက်မရှိတာ ဒါမှမဟုတ် ဖရိုဖရဲ ကျွတ်ကျဲသွားတဲ့ rhyme တွေလိုပဲ မှေးမှိန်သွားပါရော။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ဘ၀ဆိုတာ တစ်ခါတလေမှာ အဖြောင့်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းခွင့် မရပါလိမ့်?
Shit!!! ပင်လယ်လေတွေဟာ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကို ခပ်ပြင်းပြင်း တိုးခတ်သွားတာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် မျက်ဝန်းတွေကို အသာမှေးမှိတ်လိုက်ကာ မေးကြောတွေတင်းပြီး လည်ပင်းသွေးကြောအချို့ထောင်သွားတဲ့အထိ အံကြိတ်မိပါရဲ့။ ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေ တာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်သလိုခံစားနေရတယ်။ တစ်စုံတစ်ခု…..တစ်စုံတစ်ရာ ဒီအ၀န်းအကျင်တစ်ဝိုက်မှာ ခိုအောင်း…. ကျွန်တော့် အနီးအနားမှာ…..အာ….ကျွန်တော့် နားရွက်တွေကို လေနွေးနွေးနဲ့မှုတ်လိုက်သလား….လည်တိုင်အနှံ့ကို လက်ဖ၀ါးနုနုနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက်သလား?
ဒါ ဒါ မင်းပဲ ဥက္ကာ….ဒီလိုလုပ်တတ်တာ မင်းတစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်အနှံ့ဝေ့၀ိုက်ရှာဖွေကြည့်မိပြန်တော့ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။
မိနစ်အနည်းငယ်လောက်တော့ ဟိုသည်ရှာကြည့်မိရပြီး နောက်တစ်နေရာမှာ ပြောင်းရွှေ့ရှာဖွေ့ကြည့်ပြန်တယ်။ ညနေစောင်းဝယ် တစ်ယောက်မှ ကမ်းခြေအနီးအနားမှာမရှိ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေဟာ ကြောက်လန့်စိတ်မ၀င်ဘဲ ရင်ခုန်ကြည်နူးမှုတွေ တိုးလာပါရဲ့။ အိုး…..ပင်လယ်လေညှင်းနဲ့အတူ ရလိုက်တဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့အချို့ကြောင့် အလွန်တရာငြိမ်းချမ်းသွားရတယ်ဆိုရင် ယုံနိုင် ကြပါ့မလား ကျွန်တော့်နှာခေါင်း၀၀ယ် ဝေ့၀ဲနေပြီ။ ဟာ ဟ ရှေ့ကသဲပြင်ပေါ်မှာ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ မရှိတတ်တဲ့ တရုပ်စကားပန်းပွင့်လေး တွေက ခြေရာခံလိုက်ဖို့ သဲလွန်စပေးထားတယ်။ မှားယွင်းစရာ မရှိဘူး သူပဲ ဥက္ကာ…..အား။ ရုတ်တရက် လေထဲမြောက်ကနဲဖြစ်သွားရ ကာ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကြီး ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ် ဗြန်းကနဲကျသွားရပါပြီ။ ဥက္ကာနဲ့ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့မိကြပြီ နောက်တစ်ကြိမ် ခွဲထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါလေ။ မျက်လှည့်ဆန်တဲ့ ခရီးတိုတစ်ခုရဲ့အလွန် ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်တွေရှိရာနေရာတိုင်းကို ကူးခတ်တော့မယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရှိရာကို ခြေလှမ်းကြ မယ်။
အခု ခြေတစ်လှမ်း တစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်တဲ့ သဲပြင်ပေါ်ကခြေရာတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချစ်စိတ် ခံစားချက်တွေဟာ….
‘မဟုတ်ပါ….ဒီက ပိုချစ်တာ ဟာ ဟ’
Alex Aung (27 Jan 2015)